Umaki: erik qualman | Martech Zone
Umaki: erik qualman
I-Mobilenomics: Uma Ungesona Iselula, Awumakethi
NgoMsombuluko, Mashi 25, 2013 NgoMsombuluko, Mashi 25, 2013 Douglas Karr
Sizizwa sihle ukuthi sibona ukuthambekela kobuchwepheshe kuza bese sikwazisa ngaphambi kwesikhathi. Besilokhu sikhuluma ngokukhula kweselula isikhathi esingaphezu konyaka manje, kodwa simangele lapho senza nje ukuhlolwa okuhlelwa iklayenti lakamuva futhi babengenayo isu leselula… abekho. Isiza sabo besingeyona iselula, ama-imeyili wabo ebengalungiselelwe iselula, futhi azikho izinhlelo zokusebenza zeselula ekuqedeni… nada. Kwesinye isikhathi kuthatha ividiyo
Isiqophi Social Media 2013
U-Erik ubuyile nesitolimende sakhe sakamuva (sesine) se-infographic yevidiyo yakhe ezinkundleni zokuxhumana. Uma ulalelisisa, inguqulo ngayinye yevidiyo yenza umsebenzi omangalisayo ekuboniseni ushintsho le midiya emisha eshanele umhlaba ngalo. Ngisho nama-parodies ayamangalisa. Qhathanisa nevidiyo yeSocial Media Revolution yangonyaka odlule futhi uzothola izibalo eziningi kakhulu ezihlotshaniswa nokuxhumana kwangempela, kwemali phakathi kwemikhiqizo nabathengi. U-Erik Qualman uyisibonelo
Ividiyo: Social Media Revolution - The Parody
ULwesine, May 24, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Sithumele uchungechunge lwamavidiyo wezinguquko kwezokuxhumana asuselwa ku-Erik Qualman's Socialnomics. Banokuqonda futhi bagcwele izibalo ezimangazayo zokuthi imithombo yezokuxhumana iyiguqula kanjani indlela esiphila ngayo, esisebenza ngayo futhi sixhumana ngayo nabanye. Le parody ihlekisa kakhulu ukuthi ungabelani ngayo, noma kunjalo. Abantu bathi uma uthinta iqiniso… yilapho izinto zihlekisa khona impela. Ngicabanga ukuthi le vidiyo iyilokho nje! I-Social Media Revolution - I-Parody
NgoLwesithathu, ngoMashi 5, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lapha ngihlala egumbini lehhotela eMilwaukee, eWisconsin. Ithimba lethu lethula inkampani enhla lapha kusasa bese ibuyela e-Indianapolis. Ngithenge isudi entsha yohambo - ibithengiswa cishe ngama-70% wesephulelo futhi angikwazanga ukukudlulisa. Ungumbala onsundu kashokoledi - ucishe ube mnyama - futhi unethezekile impela. Angikathengi isudi eminyakeni eminingana ngakho ngaziphatha ngokuphelele